Tinogona Kufadza Kuti Tive Nani Pakushambadzira Pedu Pedu? | Martech Zone
Mugovera, October 1, 2016 Douglas Karr
ichi spoof mubairo vhidhiyo yakanakisa. Kuseka kwakanyanya kunogara kuchioneka kwakadzika midzi mukutendeseka, uye kupa mubairo kunosekesa zvechokwadi. Ini handisi poo-pooing mibairo zvachose; Ini ndinotenda kuzivikanwa kwemaindasitiri kwakakosha. Inopa humbowo hwechiremera chako uye inovaka kuziva kune vateereri vane hukama.
Tine chinoshamisa yeruzhinji hukama agency iyo yatinoshanda nayo. Vakazadza maoko avo nesu, vachisundira chigadzirwa (chinyorwa ichi) sechinhu, chedu digital kushambadzira agency semutungamiri, Jenn se kushambadzira MC uye mutauri, uye neni se wekushambadza mutungamiri mutungamiri, wekushambadzira mukuru mutauri, uye wekushambadzira mutauri. Chinhu chikuru pamusoro peedu PR vanhu ndechekuti ivo vanogara vachitimanikidza kuti tizvitsaure pachedu. kusanyara kuzvisimudzira. Ugh.
Tine hurombo netambo inofinha yekusanyara yekusimudzira-buzzworthy zvinongedzo. Ndine mhosva, zvakare.
Ini handina chokwadi chekuti mitsara yakasviba pakati peiyo ego uye kuzvivimba, asi hazvisi nyore. Pakati pezvakakangwa zvemakesi makosi uko iwe unosarudza chete akanakisa mhedzisiro awakakwanisa iwe, kune iko kuunganidzwa kwemabuzzwords, kune emumagaba kesi zvidzidzo - zvese zvinogomera. Iye zvino ndinoziva zvazvakaita kunyora hurukuro dzezvematongerwo enyika, mhinduro dzeRFP, uye kuburitswa kwekuburitswa kwekurarama.
Nhasi ndadurura bhegi rangu reSchwag kubva kumusangano - charger yefoni, nhare inonamira, USB chigunwe dhiraivha, moleskins, post-it noti pads, uye imwe doro bhodhoro rinovhura. Jonathan Green, munyori we Green's Duramazwi reSlang, yakateedzera kumashure izwi schwag, haungatende mabviro ezwi iri:
Yakaderera mhando mbanje yainzi ditchweed, schwag, uye skunkweed.
Ini ndaigara ndichifunga kuti schwag yaive ruzha bhegi remarara rakagadzirwa parakarova hotera yako yemarara. Asi kwete. Zvakatonyanya ...… zvakaenzana nekutengesa hari. Ini handina kumbotengesa hari, asi ini ndinogona kungofungidzira kuti kuzadzikisa basa kungave kuri sei. Crappy kushambadzira kunofanirwa kuve kwakaipisisa.
Tinofanira kuzvishambadza, asi hatifanirwe kuzviita sevamwe vese.
Hezvino izvo zvandinofunga nezvazvo pandinotarisa kutenderedza indasitiri yedu:
Icho chokwadi chekuti isu tinofanirwa kuzviita hachititadzise kubva pakuva vepakutanga, zvakadaro. Nekuda kwaMwari, vanhu, ngatiisei kufunga mukushambadzira kwedu. Zviparadzanise kubva kune vezera rako uye rega kuyedza kutevedzera ivo.
Ok, ndipo paunondiendesa kuguta kune yangu yekushambadzira kushambadzira. 😉
Tags: award showAwardunozvitengesaaonekweNdinondidakushambadza iwe